काठमाडौंमा बालेनको परीक्षा : के छन् उनका एजेण्डा ? - NepalWatch
काठमाडौंमा बालेनको परीक्षा : के छन् उनका एजेण्डा ?
Previous News २०७९ जेठ २९ गते १८:३६
नेपालवाच २०७९ जेठ १२ गते १८:३६
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्रतर्फबाट मेयर पदमा विजयी बालेन शाहले काठमाडौं सुधारका लागि ६ पृष्ठको प्रतिबद्धता यसअघि नै पेश गरिसकेका छन् । एमालेका विरासत रहेको काठमाडौं महानगरमा मतगणना सुरु भएदखि नै अग्रता कायम राखेर उनी विजयी भएका हुन् ।
एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई हराउँदै जित हासिल गरेका बालेनको अब परीक्षा सुरु भएको छ । गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका शाह किन राजनीतिमा आए भन्ने अधिकांशको कौतुहुलता छ । र्यापरको पृष्ठभूमिमा रहेका बालेनको अब परिचय थपिएको छ ।
विगतका मेयरजस्तो काठमाडौंको विकासका लागि उनले त्यत्ति धेरै महत्वकांक्षी योजना पेश गरेका छैनन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने योजना भएपनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका हुनाले त्यसले ठूलो अर्थ राखेको देखिन्छ ।
विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदालगायतमा उनले जनतासामु आफूले पाँच वर्षसम्म गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
प्रत्येक वडामा प्रविधियुक्त क्लिनिक
स्वास्थ्यमा उनले प्रत्येक वडामा योग्य चिकित्सक, नर्सिङ प्रोफेसनल, फार्मासिस्ट र नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि डायग्नोस्टिक ल्याबसहितको स्वास्थ्य क्लिनिक सुरुवात गर्ने जनाएका छन् ।
त्यस्तै अहिले भइरहेका अस्पतालको पूर्वाधार गुणस्तरीय सुधार गर्ने, उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्वस्थ वातावरणसहितको सरसफाइ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
प्रतिबद्धतामा जनाइएअनुसार दीर्घकालीन रोग जस्तै मधुमेह, रक्तचापजस्ता रोगको दिगो नियन्त्रणका उपायस्वरुप जगिङ तथा व्यायाम गर्ने पार्क निर्माण गरिनेछ ।
एम्बुलेन्स र दमकल अब कल सेन्टरबाटै, वृद्धालाई घरघरमै स्वास्थ्य परिक्षण
पूर्वाधार विकासतर्फ नयाँ पूर्वाधारको विकासलाई कम भएका पूर्वाधारको व्यवस्थापनतर्फ बालेनले जोड दिएका छन् । यसबीचमा उनले पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै जोड गरेको विषय हो कल सेन्टरमार्फत नै समस्याको सामाधान । कल सेन्टरमार्फत सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्सबाट सडक, ढलजस्ता पूर्वाधारको मर्मतसंहार गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।
स्वास्थ्य एम्बुलेन्स, पूर्वाधार एम्बुलेन्स, पशु एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड र विपद् जाखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनसहित कल सेन्टर सञ्चालनमा आउनेछ ।
७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण घरघरमै गरिने जनाइएको छ ।
उनले सरकार विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने र वडास्तरमै स्तन क्यानसर, पाठेघरको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने योजना अघि सारेका छन् । सार्वजनिक शौचालय, सरकारी कार्यालय सार्वजनिक स्थानहरुमा स्तनपान, शिशु नर्सिङ कोठाको व्यस्था गरिने जनाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथामिकता
शिक्षातर्फ बालेनको पहिलो प्राथामिकता छ, महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, गुणस्तर र वातावरणमा सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने । योसँगै इतिहास, योग, आयुर्वेदजस्ता पौराणिक शिक्षासँगै विश्वस्तरमा जोड्न सकिने किसिमका उच्चस्तरीय प्रविधिसहितका कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम पमिार्जन गर्ने योजना छ ।
निजी विद्यालयमा शुल्क बढीरहँदा बालेनले विद्यालयमा मासिक शुल्क बमोजिमको शिक्षा छ/छैनबारे पनि अडिट गर्ने जनाएका छन् । हाल भइरहेका पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षादेखि सूचना प्रविधि शिक्षाको परिचय दिनेगरि पाठ्यक्रम विकास गर्ने उनको योजना छ ।
काठमाडौंको पुर्ननिर्माणमा भक्तपुरसँग सहकार्य
त्यस्तै काठमाडौंका सांस्कृतिक महत्वका स्थानका पुनर्निर्माणका लागि भक्तपुरका दक्ष जनशक्तिसँग सहकार्य गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् । सबै वडा र टोल तहमा सार्वजनिक शौचालय र बस स्टपमा फल्था निर्माण गर्ने उनको योजना छ । त्यस्तै भइपरी हुने आगलागीका क्षतिबाट जोगिन फायर ब्रिगेड पुग्न नसक्ने साँधुरा गल्लीहरुमा ओभर हेड ट्याक्सी र फायर हाइड्रन्टहरु स्थापना गर्ने उनको योजना छ ।
काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन
काठमाडाैंको सधै टाउको दुखाइको कारण बनिरहेको समस्या हो ट्राफिक जाम । यहाँको सवारी साधनको मात्रा र आवतजावतलाई व्यवस्थापन गर्न संघसंस्था तथा कार्यालयको प्रकृतिको आधारमा वर्गिकरण गरेर कार्यालय समयका विभाजन गरिने उनको योजना छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक तथा महानगरीय यातायातलाई एकै छाता संगठनअन्तर्गत ल्याएर शतप्रतिशत विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको थालनी गरिने छ । सबै स्थानीय यातायातमा जिपिएस जडान गरिने र सुरक्षाका लागि सबै स्थानीय यातायातमा सिसिटिभी जडान गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै महानगरभित्रका केही भवनहरु भाडामा लिएर बहु–तले पार्किङमा परिणत गरिने जनाइएको छ । उनका योजना अनुसार महानगरको आफ्नै ट्याक्सी एप सञ्चालन गर्ने र उपभोग अवधि वा समयअनुसार खुला ठाउँहरुमा फुटपाथ व्यवसायको समयतालिका निर्धारण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात एप र मासिक प्रिपेड कार्डको सुरुवात गर्ने योजना पनि छ ।
आफ्नै कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्लबहरुसँगको सहकार्यमा युवा लिग आयोजना गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ई-स्पोर्टस प्रतियागिता आयोजना गर्ने जनाएका छन् । यसले पर्यटन तथा अर्थशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रवद्र्धन हुने उनले विश्वास लिएका छन् ।
सरकारी कार्यालयबाटै पानी व्यवस्थापन
पानीको व्यवस्थापना लागि बालेनले सरकारी कार्यालयमै जमिन पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । बालेनले पटक-पटक गरेको वाचामध्येको एक हो महानगरका सबै ढुंगेधारा, हिटीलाई पुनःजाग्रित गराउने । उनले काठमाडौंमा आफ्ना भएका मुहानको संरक्षण नगरेर मेलम्चीको पानीको आश गर्नुलाई मूर्खताको संज्ञा दिएका थिए । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानीको सबै तहमा अनुगमन र सहकार्य गर्ने जनाएका छन् ।
फोहारमा आस्फल्ट मिसाएर सडक कालोपत्रे
काठमाडौंको अर्को मुख्य चुनौती हो फोहोर व्यवस्थापन । यसको लागि अर्गानिक, प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरलाई छुट्टै संकलन गरेर उच्चस्तरीय प्रविधिले व्यवस्थापन गरिने योजना छ । त्यसको लागि काठमाडौं महानगरनजिकै इन्सिनरेटर जडान गरेर अर्गानिक फोहोरलाई प्राङ्गारिक मलमा परिणत गरी नजिकको कृषि प्रधान जिल्लाहरुमा बिक्री गरिने योजना छ । त्यस्तै महानगरभित्रका सडकमा कालोपत्रे गर्दा प्लाष्टिकजन्य फोहोरसँगै आस्फल्ट मिसाएर गरिनेछ । त्यस्तै कारखाना वा औद्योगिक फोहोरको परिवर्तनीय क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
महानगरमा खुल्ला ठाउँको अभाव पूर्तिका लागि नक्साङ्कित ४२ देख ४५ खुला ठाउँहरुलाई तिनिहरुको आकार अनुसार पार्क, खेलकुद मैदान, व्यायाम र दौड गर्ने ठाउँहरुमा रुपान्तरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कुकुरदेखि म्ह पूजाको अन्तराष्ट्रिय ब्रान्डिङ
यहाँको संस्कृतिको जगेर्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुकुर तिहार र म्ह पूजाकाे ब्रान्डिङ गर्ने बालेनको योजना छ । त्यस्तै, स्थानीय गुठी, बाजा, खल, मन्दिर बिहार, गुम्बा, बहाल र अन्य स्थानीय आदिवासी उपसमूहहरुलाई सांस्कृतिक प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
कृृषि प्रदान नगरपालिकाहरुमा अर्गानिक फोहोरको रुपान्तरणबाटै जैविक मल उपलब्ध गराइने योजना छ ।
खाली जग्गा भाडामा लिइ उत्पादन बढाउने
तरकारी उत्पादन गर्न र काठमाडौंको ८० लाख जनसंख्यालाई उपभोग गराउन देशभरका कृषियोग्य खाली जग्गाहरु भाडामा लिएर फलफूल तथा तरकारी खेती गरिनेछ । उत्पादित फलफूल तथा तरकारीका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बीउ उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादन र रोजगारको सिर्जना गरिने योजना छ ।
शैक्षिक पृष्ठभूमि नभएपनि युवाहरुलाई कृषि तालिम दिएर महानगरले भाडामा लिएको जग्गामा रोजगारी दिनेछ ।
राष्ट्रिय खेलाडीलाई विद्यालयमा परिचालन
खेलकुद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि वडास्तरमै खेलकुद मैदान र खेलकुद केन्द्र निर्माण गरिने बालेनको योजना छ । बैंकहरुसँग उनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समावेश गर्न सहकार्य गरिने र विद्यालयदेखि वडा तहमै तालिम दिन राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई तलब उपलब्ध हुनेछ ।
आफ्नै कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्लबहरुसँगको सहकार्यमा युवा लिग आयोजना गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ई-स्पोर्टस प्रतियाेगिता आयोजना गर्ने जनाएका छन् । यसले पर्यटन तथा अर्थशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रवद्र्धन हुने उनले विश्वास लिएका छन् ।
बालेनको कार्यकालमा सरकारका सारा काम अनलाइनबाटै सुचारु गर्ने योजना छ । कर तथा प्रमाणपत्रको सेवा अनलाइनबाटै मिलाइनेछ भने वृद्धाभत्ता तथा अन्य प्रमाणपत्रको पनि होम डेलिभरी गरिनेछ । त्यस्तै कार्यपालिकाको महत्वपूर्ण बैठक र निर्णयहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने उनको योजना छ ।
मार्टमा स्थानीय उत्पादनको लागि २० प्रतिशत ठाउँ
स्थानीय उत्पादनको लागि प्रत्येक मार्टमा २० प्रतिशत ठाउँको विनियोजन गर्ने योजना बालेनले अघि सारेका छन् । त्यस्तै हस्तकला, घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सिड मनि र तालिम प्रदान गर्ने उनको योजना छ । अदक्ष जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति, लगानीकर्ता, उद्यमशीलता विशेषज्ञको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरु उपलब्ध गराउन सहकार्य गरिने योजना छ ।
त्यस्तै, जनताको सीप, प्रविधि सुधारका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्यको योजना छ । काठमाडौं महानगरको समस्या सामाधानका लागि पनि केन्द्रलाई अनुदान दिइनेछ ।
महानगरभित्र १० हजार सिसिटिभी जडान
महानगरको सुरक्षाका लागि यहाँको अपराध नियन्त्रण र निगरानीका लागि प्रारम्भिक चरणमा १० हजार सिसिटिभी जडान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सुरक्षा सुधारका लागि नगर प्रहरीलाई तालिम दिने र प्रहरीको संंख्या बढाउनेलगायतका योजना छन् ।
पोखरा महानगर : नगरसभा बहिस्कार गर्दै एमाले जनप्रतिनिधिले च्याते रातो किताब
काठमाडौं महानगरको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख, प्राथामिकतामा ढुंगेधारा पुनस्र्थापना
मेयर शाहले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित
स्थानीय निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोगको निर्देशन